စွဲလမ်းမှုကိုအနိုင်ယူရန် 'R' အဆင့် ၄ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
စွဲလမ်းအောင်နိုင်ရန် 'R' အဆင့် ၄
ဂျက်ဖ်ရှဝါ့စ်၏ 'စိတ်နှင့် ဦး နှောက်' စာအုပ်မှကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်အကြံပေးချက်များကိုမျှဝေမည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
စာရေးသူက 'R' အဆင့် ၄ ဆင့်ကိုအကြံပြုသည်။ Refocus, Reattribute, Relabel နှင့် Revalue.
အဆိုပါတတ်ပြီးသင်တာမျိုးအခါ, relabel နှင့် reattribute, mindfullness လုပ်ဆောင်နှငျ့သငျရုံတစ်ဦးနှောက်လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးပြဿနာအားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင် obsessive အတှေး၏တိုကျခိုကျမှုကိုကြုံနေရသည်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ပြောပြပါ။ တစ်ခု ထား. signal ကိုနှင့်အတူသင့်ဦးနှောက်အလင်းရောင်တက်၏တိုကျရိုကျ cortex ထက်ပိုအဘယ်မျှမဟုတ်သကဲ့သို့အဆိုပါတိုက်တွန်းမြင်ယောင်ရန်ဤတွင်၎င်း၏ကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေ။
refocus obsessive အတှေး၏တိုကျခိုကျမှုကိုအောက်မှာ 15 မိနစ်တဲ့ကာလတစ်ခုလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အပြုအမူ။ 15 မိနစ်ရှိပြီးသားတတ်ပြီးအနိုင်ယူယုံကြည်ပျမ်းမျှအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည် refocus လုပ်ရပ်များပိုမို inhibitory သောသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းမှတိုက်ရိုက်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းကနေတိုကျရိုကျ cortex မှဦးနှောက်အသွားအလာချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲစေပါသည်။ ထို့အပွငျကအသစ်တခုအပြုအမူနှင့်အတူယခင် signal ကိုဆက်စပ်ဖော်ပြထားသည်။ refocus တည်မြဲအပြောင်းအလဲများကိုဖန်တီးအရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုမှုထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ In-line ကိုစကိတ်စီးခြင်း, ဘာဝနာအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် refocus .. နှင့်တတ်ပြီးအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာ Business စောင့်ရှောက်ဖြစ်နေဆဲပါလျှင်!
Done မှန်မှန် refocus အသစ်တခုအလိုအလျှောက် circuit ကိုခိုင်မာစေခြင်းနှင့်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အဟောင်းရောဂါဗေဒတဦးတည်းအားနည်းနေ!
နောက်ဆုံး revalue (relabel တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းပုံစံ) လျင်မြန်စွာသူတို့အပျေါမှာသရုပ်ဆောင်သေးတစ်ဦးတည်းအပေါ်ကိုစီးမီးခိုးရောင်ကိစ္စမခံထိုက်သည်အတိုင်း, မိုကျမဲမမှန်သော, ထား. ဦးနှောက်အချက်ပြမှုများကိုထိုစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအတွေးများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ပညာရှိအာရုံစူးစိုက်မှု (ကဗုဒ္ဓဘာသာအလေ့အကျင့်) ကိုသုံးနိုင်သည်။ မကျြနှာကိုတနျဖိုးမှာ obsessive အတှေးအယူကိုငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့်, သူတို့ကဦးနှောက်ကနေအဆိပ်သင့်စွန့်ပစ်အဖြစ်ရှုမြင်ခံရထံသို့လာကြ၏။